Taunggyi - The Cherry Land: အတိတ်က အမှတ်တရများ
ရေးသားသူ Unknown အချိန် 3:08:00 PM
ဟုတ်တယ် MaThinZar ရ..
ကျွန်တော်လဲ ကျောင်းသားဘ၀ကို ခဏခဏ ပြန်တွေးမိတာပဲ.. အမှတ်တရတွေ အများဆုံး ရှိခဲ့တဲ့ နေစွဲတွေလေ.. သင်ယူခြင်းတွေ၊ လေ့လာခြင်းတွေနဲ့ ပျော်ဖို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ..
ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာ အခုနဲ့ တစ်ခြားစီပဲလေ.. ဖြူဖြူစင်စင်၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့.. မိုးတွေရွာရင် ကျောင်းဝတ်စုံလေးကို အရမ်းသတိရတယ်.. ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ပြန်မရနိုင်တာတွေကို လွမ်းတယ်.. ကျောင်းကြီးကို သတိရတယ်.. ကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတယ်.. အားလုံးကို သတိရတယ်.. ပြောရင်းတောင် သတိရလာပြီ.. :)
ပထမဆုံး ပို့စ်အတွက် ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.. နောက်ထက် ရေးမဲ့ ပိုစ့် တွေကို မျှော်နေပါ့မယ်..
Sai Thein Than Tun said...
that reminds me of my childhood too, coz i am also from state 4. ur post kinda make me participate in this blog.
May be i could try posting the school's foto.
Thursday, August 02, 2007 6:07:00 PM
သဉ္စာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အထက(၄) ကျောင်းထွက်ဆိုတော့ အတူတူပပြေါ့ သဉ္စာ မှတ်မိသေးလားတော့ မသိဘူး အ.ထ.က(၄)ကို မုဆိုးဖိုကျောင်း အ.ထ.က(၃)ကို မုဆိုးမကျောင်းလို့ နာမည်ပြောင်မှည့်သေးတယ်လေ
Saturday, May 09, 2020 9:02:00 PM